MEMES တွေကိုကူညီဖို့စားပါ။ အသစ် RISHI SUNAK အစီအစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှု ၁၉ ခု - သတင်း
Exchequer ၏အဓိပတိ Rishi Sunak သည်စနေနေ့စနေနေ့တွင်ထွန်းလင်းတောက်ပမည့်အချိန်အထိ Apprentice semi-finalist ၏အပြုအမူကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Sunak ၏မျက်နှာဖြစ်ပါတယ် အစိုးရအစီအစဉ်သစ်ကကူညီဖို့ထွက် အရာတိုင်း Brit စားသောက်ဆိုင်များတွင်ဖြုန်းဖို့ဘောက်ချာပေးလိမ့်မည်ကြောင်းပါဝငျသညျ။ တနင်္လာနေ့မှသြဂုတ်လဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိအစီအစဉ်သည်ဖောက်သည်များအစာစားသောအခါတစ် ဦး လျှင်ပေါင် ၁၀ ပေါင်အထိလျှော့စျေးကိုပေးထားသည်။
Exec ၏ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာအဓိပတိမရှိတော့ Sunak သည်ရဲရင့်သောအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်နေသည့်လှုပ်ရှားမှု၏မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအမည်ဖြင့်ကမ္ဘာ့ပြောင်းလဲနေသောအော်ဂဇင်များကိုထုတ်ပေးသောအခါသူသည်ကျေးဇူးတင်သူဖြစ်သည်။
တွစ်တာသည်သူ၏အဓိပတိကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမပြောဘဲအဓိပတိကမည်သို့ပြောဆိုနိုင်သည်ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ hashtag ကိုကူညီရန်မည်သူထွက်လာသည်ကိုအတိအကျသိရန်တောင်းပန်သည်။ ဘဏ္asာရေးအသင်း၏အထင်ကြီးစရာမရှိသောတီထွင်ဖန်တီးမှုမှသည် Sexy Fish မှနောက်ဆုံးတွင်လျှော့စျေးရရှိသည်အထိ - အစီအစဉ်ကိုကူညီရန်စားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်စုများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၁။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော romcom မှချက်ချင်းထွက်ယူပါ
နောက်ဆုံးဘတ်ဂျက်ကြေငြာချက်မှာအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကရိုက်ထည့်နေသလား။ #eatouttohelpout pic.twitter.com/hVPIh47ZB7
- Nick Weston (@ Nicksgr8) ဇူလိုင်လ 8, 2020
ထွက်ကူညီအတူထွက်စားနှင့်အတူတက်လာဘဏ္ာရေး comms အဖွဲ့ pic.twitter.com/9qtCRiRx5g
- Abby Tomlinson (@twcuddleston) ဇူလိုင်လ 8, 2020
3. Rishi သည်ငါတို့မသိသောအမျိုးသမီးရေးရာသင်္ကေတဖြစ်သည်
ကူညီဖို့စားတာဟာဗြိတိသျှအမျိုးသားများဆီကိုပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့သတင်းစကားပါ။ Rishi ကဒီရဲရင့်တဲ့အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်
- sarisha (@milkgapes) ဇူလိုင်လ 8, 2020
4. Bye ငါထွက်ပေါ့
သင်ရရှိသောစျေးဝယ်ဘောက်ချာအကြောင်းကို£ 500 ဖတ်ရန် twitter သို့သွားသည်။ ထိုအခါသင်သည်သြဂုတ်လအတွင်းက Nando ရဲ့မှာ£ 10 ကိုချွတ်ရတဲ့နေထွက်ရှာတွေ့။ pic.twitter.com/KXgpkkZGTE
- ‍🦲 (@FoxDerYaKnowDat) ဇူလိုင်လ 8, 2020
၅။ ခြောက်လရှောင်ကြဉ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို 'အကူအညီပေးရန်ထွက်စားပါ' ဟုစာပို့ခြင်း
hashtag နှင့်အတူတက်လာ။ အကြင်သူသည် #EatOutToHelpOut pic.twitter.com/4FCzIU4m9K
- RuPaul's Drag Race UK (@dragraceukbbc) ဇူလိုင်လ 8, 2020
6. သင်သည်ဤအချိန် Sexy ငါးငါ့ကိုစွန့်ပစ်လို့မရပါဘူး !!
Sexy ငါးမှာ£ 10 ကိုချွတ်! #eatouttohelpout pic.twitter.com/biJJb6tro7
- Ivo Graham (@IvoGraham) ဇူလိုင်လ 8, 2020
7. ငါမစောင့်နိုင် !!!
အခုသြဂုတ်လအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပေါင် ၁၀ အစားအစာဘောက်ချာရပြီ pic.twitter.com/baEWwoW1S2
- shane တုံ့ပြန်မှု (@shane_reaction_) ဇူလိုင်လ 8, 2020
၈။ အခြားနည်းလမ်းများ - 'Just The Tip' သို့မဟုတ် '' A Lend A Hand '' အလုပ်
ထို့အပြင် 'ခက်ခဲသောအချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုအတူတကွစုရုံးရန်တိုက်တွန်းရန်' လက်ကိုတင်ပါ 'အလုပ်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပါ
- ဇက်အာဗေလ (@ZakAbel) ဇူလိုင်လ 9, 2020
၉။ ငါဘောက်ချာကိုပေါင် ၅၀၀ လိုချင်သည်
ပေါင် ၅၀၀ စျေးဝယ်ဘောက်ချာကိုမျှော်လင့်ပြီး chiquito တွင် Tenner တစ်လုံးဝယ်ပါ #eatouttohelpout pic.twitter.com/RdUrQAQ5rR
- ဒင်းကော်ဖီ (@deanimartini) ဇူလိုင်လ 8, 2020
၁၀။ လိပ်ပြာကြက်သားတစ်ကောင်ဝယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ PS5 အိပ်မက်ကိုရောင်းဝယ်ခြင်း
မျှော်လင့်ချက် - PS5 အတွက်အခမဲ့ဘောက်ချာ
အဖြစ်မှန်: nandos ပယ်£ 10 #eatouttohelpout pic.twitter.com/fAacn30mwV
- dyl (@dyl_ge) ဇူလိုင်လ 8, 2020
သူ့လူများအား Pizza Express တွင်သီးသန့်ပေါင် ၁၀ ပေါင်လျှော့ချပြီးသည့်နောက် Rishi Sunak သည်သူ၏မူဝါဒအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ DFS ဆိုဖာမှ ၃၀%
၁၂။ Pornhub သည်မကြာသေးမီကများစွာခေတ်စားနေသည်
ဘယ်အချိန်ကတည်းက P0rnhub Trending Hashtags ရခဲ့တာလဲ #eatouttohelpout pic.twitter.com/P2SyGvN4gW
- လူးကပ် (@lukakcv) ဇူလိုင်လ 8, 2020
ငါဘယ်သူချွတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ကိုငါသိရန်လိုအပ်သည် #EatOutToHelpOut pic.twitter.com/KRK62rhvQv
- အီလီ (@eIIiemvrphy) ဇူလိုင်လ 8, 2020
14. အမှုဆောင်၏အဓိပတိသည်အခြေခံအားဖြင့် UniDays အမှတ်တံဆိပ်အတွက်လာသည်
စီးပွားရေးကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ပေါင်စတာလင် (၅၀၀) ကိုပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလထွက်လာရင်ငါအဲဒါကိုကြိုက်တယ်။ အဲဒီအစားကျနော်တို့က Pizza Express မှာကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေးရ။
- Calum Sherwood (@CalumSSherwood) ဇူလိုင်လ 8, 2020
ဖန်တီးသူ tory အလုပ်သင်ဆရာဝန် #EatOutToHelpOut twitter rn မှတဆင့် scrolling pic.twitter.com/UFNC49RYAf
- ရာခေလ (@raxhol) ဇူလိုင်လ 8, 2020
16. No, Andrew, မင်းက Pizza Express ကိုမသွားဘူး
မဟုတ်ပါ၊ အင်ဒရူး၊ သင်က Pizza Express ကိုမသွားဘူး။ တစ် ဦး tenner ကိုချွတ်ရှိတယ်လျှင်တစ်ခုမှာဂရုမစိုက်ပါဘူး။ #eatouttohelpout
- အဲလစ်ဇဘက်ဝင်ဆာ (@Queen_UK) ဇူလိုင်လ 8, 2020
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းသည် ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လခန့်တွင်ပေါ်လစီဆောင်ပုဒ်ကိုကူညီရန်ထွက်ခွာလာသည် pic.twitter.com/U34iXdIiGs
- ဆိုဖီ (@ SophieJane96x) ဇူလိုင်လ 8, 2020
လိင်တူချစ်သူအမျိုးသမီးတ ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကူညီရန်အစားအစာများကိုစားရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်
- deanna (@deanna_hallett) ဇူလိုင်လ 8, 2020
လိင်တူချစ်သူ။ ငါတို့အချိန်ရောက်လာပြီ #EatOutToHelpOut #BeAHero pic.twitter.com/ONspPyo4Y6
- Periwinkles (@Periwinkles_KE) ဇူလိုင်လ 9, 2020
20. horny ထောင်သို့သွားပါ
- Lew_h 󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Lewis__hobbs) ဇူလိုင်လ 8, 2020
၂၁။ ငါတို့အစား ... အစားအစားအသောက်ဘဏ်များကိုလှူဒါန်းလိုပါသလား။
ငါတို့လှူဒါန်းလို့ရမလား #eatouttohelpout အစားအစားအစာဘဏ်များမှပိုက်ဆံ?
- ဂျင် (@Jennyflower) ဇူလိုင်လ 8, 2020
Jess Glynne ကိုစားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
Free Britney - Britney Spears ကိုလူတိုင်းရုတ်တရက်လွှတ်ပေးဖို့ဘာကြောင့်တောင်းဆိုရတာလဲ